Madaxweynaha Hirshabelle oo xariga ka jaray xarunta Taleefishinka Hirshabelle -
Home News Madaxweynaha Hirshabelle oo xariga ka jaray xarunta Taleefishinka Hirshabelle
Madaxweynaha Hirshabelle oo xariga ka jaray xarunta Taleefishinka Hirshabelle
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Ali Gudlaawe Hussein ayaa maanta xariga ka jaray Tv-ga Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle.
Munaasabada xariga looga jarayay Tv-ga Madaxweynaha waxaa ku wehliyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed, Gudoomiye Ku Xigeenkiisa 2aad Mahad Xasan Cusmaan,wasiiro,wasiir ku xigeeno,xildhibaano iyo maamulka gobolka Sh/dhexe iyo kan degmada Jowhar.
Gabagabadii munaasabada xarig jarka ayuu Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe waxa uu ka sheegay in furitaanka taleefishinkan uu qeyb ka yahay ballanqaadkii uu sameeyay kahor inta aan loo dooran Madaxweynaha Hirshabelle oo ahayd in boqolka maalmood ee ugu horeysa uu hirgelin doono taleefishin iyo idaacad uu yeesho maamulka Hirshabelle.
“Waxaan rajeynayaa in taleefishinkan uusan noqon mid lagu ammaano madaxda Hirshabelle balse uu sidoo kale dhaliisha iyo waxyaabaha maamulka lagu dhibsanayo uu sheego,isla markaana madaxda su’aalo lagu weydiin karo oo bulshadana u adeega.”ayuu yiri Cali Guudlaawe.
Madaxweynaha ayaa soo indha indheeyay Xafiisyada iyo Iyo qeybaha kala duwan ee uu Tv-ga ka kooban yahay.
taleefishinka hirshabelle oo xariga laga jaray
Previous articleFrance bans right-wing group generation identity
Next articleDowlada oo mamnuucday isu imaatinka dadweynaha